“Waxa La Haya Oo Duuban Guddoomiyihii Komishanka Oo Ilma Yar Oo Da’diisu Ka Hoosayso Xilligii Codaynta Isagu U Fududaynaya Sidii Uu U Codayn Lahaa,” Xoghayaha WADDANI – WARSOOR
London – (warsoor) – Xoghayaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Md Khadar Xuseen Cabdi (Looge) ayaa sheegay in eedaha xisbigu u jeediyay Guddida Doorashooyinka Qaranka ay yihiin kuwo loo hayo dalliillo cad-cad, islamarkaana ay waajib tahay in la kala diro Komishanka.
Xoghayaha WADDANI oo waraysi ku siiyay dalka Ingiriiska telefishanka Universal ayaa sheegay in xisbigu caddaymo u hayo khaladaadka ay guddida Doorashooyinku sameeyeen “Guul iyo guul darro cidi imika kama hadlayso oo doorashada waanu aqbalay waanu hanaynay oo way socotay, Madaxweyne Muuse Biixi-na waa madaxweynahayga iyo madaxweynaha dhammaan umadda Jamhuuriyadda Somaliland laakiin, waxa la isku haya waxa weeye Khaladaadkii iyo gefefkii Komishankani sameeyeen. Gefefka Komishankani sameeyeena gefef cadcad ayaa ka mid ahaa. Waxa la hayaa oo ‘live’ ah(Toos ah) oo duuban Guddoomiyihii Komishanka oo Ilmo Yar oo da’diisu ka hoosayso xilligii Codaynta isagu u fududaynaya sidii uu u codayn lahaa. Marka anagu taanu ka hadlayna taa weeye, waxaanu ka hadlayna waar doorashadeenii wax baa inaga khaldamay ee darsi maxay ah baynu ka baran karna? Sidee baynu doorashooyinkeena u hagaajin karna? Sidee baynu u qaban karna doorashooyin daahfuran doorashooyinka soo socda? Marka wixii tagay kama hadlayno ee mustaqbalka ayaanu ka hadlayna,”Sidaas ayuu yidhi Xoghaye Khadar Looge